အ မေရိကန်ပြည်ထောင် စုမှာရှိတဲံ့ အများစု ကိန်းဂဏန်းများနဲံ ပတ်သက်ြ့ပီး ရိုးရှင်းသော မေးခွန်းများ | LLCO - အလင်းရောင် ကို ဆောင် ကျဉ်းပေးလာသော ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့အစည်း
အ မေရိကန်ပြည်ထောင် စုမှာရှိတဲံ့ အများစု ကိန်းဂဏန်းများနဲံ ပတ်သက်ြ့ပီး ရိုးရှင်းသော မေးခွန်းများ
အ မေရိကန်ပြည်ထောင် စုရဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူ မှုအရ ၂၀၀၆ ခုနစ်
အလယ်အလတ် အိမ်ထောင် စုတိုင်းဟာ
ဝင် ငွေ ဒေါ်လာ ၄၈၂၀၁ ရှိပါတယ် အသက် ၁၄ နဲံ့ ၁၄ အထက် အလုပ်လုပ်ကြတဲံ့အ မေရိကန်ပြည်ထောင် စု ရဲ့  အိမ်ထောင် စုတစ်စု ရဲ့ ဝင် ငွေဟာ
ဒေါ်လာ ၃၆၀၃၆ ရှိပါတယ်
အ လယ်အလတ လ်ူတန်းစားဆိုတာ ဝင် ငွေဟာ အဆင်းရဲဆုံးက နေ အချမ်းသာဆုံးသို့မြင့် တက်လာပြီး ဆင်းရဲသားများနဲ့ အရမ်းချမ်းသာ သောလူတန်းစားများအကြား ခွဲခြားထားတဲ့ လူတန်းစားတစ်ခု ပါ အ မေရိကန်ပြည်ထောင် စုရဲ့ အိမ်ထောင် စုတိုင်းရဲ့ တစ်ဝက်ဟာ ဒေါ်လာ ၄၈၂၀၁ထက်
ပို မို ဝင် ငွေ ရ ရှိနိင် ပါတယ်
အိမ်ထောင် စုဝင် တိုင်းရဲ့ တစ်ဝက်ဟာ
ဒေါ်လာ ၂၆၀၃၆ ထက်ပိုမိုပြုလုပ်နိင် ပါတယ်
ကောင်းပြီ ၂၀၀၈ ခုနစ် ဖေ ဖော်ဝါရီ
၂၈ ရက် အဲဒီကိန်းဂဏန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိင် ငံတကာ ငွေ ဈေးနှုန်းများနဲ့ ပုံစံအ နေအထားတစ်ခုသို့ ပြောင်းကာ မေးခွန်းများကို မေးကြည့်ကြပါစို့ 
အစိတ်အပိုင်း ဖိလစ်ပိုင် ငွေ ၁၀၅၄၀၀ ကို
ဖိလစ်ပိုင် လူမျိုးတစ်ယောက်ဟာ ရှာနိင် ပါသလား? ပစ္စည်းမဲံ့လူတန်းစားရဲ့တစ်နစ်အတွက် အရင်းရှင် အစိတ်အပိုင်းသို့ မဟုတ်
ဖိလစ်ပိုင် ငွေ ၁၀၅၄၀၀ ကို အ မေရိကန်တစ်ယောက်ဟာ ရ ရှိ နိင် ဖို့ အခွင့် အလမ်းရှိပါသလား?
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲ့ တစ်နစ်အတွက်အစိတ်အပိုင်း အိန္ဒိယ ငွေ
၁၀၃၈၀၀၀ ကို အိန္ဒိယလူမျိုးတစ်ယောက်ဟာ
ရှာနိင် ပါသလား? ပစ္စည်းမဲံ့လူတန်းစားရဲ့တစ်နစ် အတွက်
အရင်း ရှင် အစိတ်အပိုင်း သို့ မဟုတ်
အိန္ဒိယ ငွေ ၁၀၃၈၀၀၀ကို အ မေရိကန်တစ်ယောက်ဟာ ရ ရှိနိင် ဖို့ အခွင့််အလမ်းရှိပါသလား?
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲ့ တစ်နစ်အတွက်အစိတ်အပိုင်း နီပေါ ငွေ
က ရှာနိင် ပါသလား?
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲံ တစ်နစ်အတွက် အရင်းရှင် အစိတ်အပိုင်း သို့ မဟုတ်
နီပေါ ငွေ ၁၆၉၀၀၀၀ကို အ မေရိကန်တစ်ယောက်ဟာ ရ ရှိနိင် ဖို့ အခွင့် အလင်း ရှိပါသလား?
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲ့ တစ်နစ်အတွက်အစိတ်အပိုင်း မက်ဆီကို ငွေ ၂၇၈၀၀၀ ကို မက်ဆီကိုလူမျိုးတစ်ယောက်က ရှာနိင် ပါသလား?
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲ့တစ်နစ်အတွက် အရင်းရှင် အစိတ်အပိုင်း သို့ မဟုတ်
မက်ဆီကို ငွေ၂၇၈၀၀၀ကို အ မေရိကန်တစ်ယောက် ဟာ ရ ရှိနိင် ဖို့ အခွင့်အလမ်း ရှိပါသလား?
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲ့တစ်နစ်အတွက် အစိတ်အပိုင်း ဆာရီလက်ခန် ငွေ ၂၈၁၂၀၀၀ ကို ဆာရီလက်ခန် လူမျိုးတစ်ယောက်ဟာ ရှာနိင် ပါသလား?
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲ့ တစ်နစ်အတွက် အရင်းရှင် အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် ဆာရီလက်ခန် ငွေ ၂၈၁၂၀၀၀ကို အ မေရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက်ဟာ ရှာနိင် ပါသလား?
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားရဲ့တစ်နစ်အတွက်အစိတ်အပိုင်း ပီရုးငွေ ၇၆၀၆၅ ကို ပီရုးလူမျိုးတစ်ယောက်ဟာ ရှာနိင် ပါသလား?
ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစား ရဲ့ တစ်နစ်အတွက်
အရင်း ရှင် အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ်
ပီရုးငွေ ၇၆၀၆၅ ကို အ မေရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက်ဟာ ရှာနိင် ပါသလား?
အ ပေါ်က မေးခွန်းများကို သင် ဟာဟုတ်တယ်လို့ဖြေ ရင် သင် ဟာ အလွန်ကို ဝေခွဲရ ခက်နေမှာပါ အိမ်ထောင် စုတိုင်းရဲ့ ဝင် ငွေဟာ အ မေရ်ိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ဖိလစ်ပိုင် ငွေ ၄၀၄၉၀၀၀
အိန္ဒိယ ငွေ ၃၉၈၅၀၀၀ နီပေါ ငွေ ၆၄၉၃၀၀၀ မက်ဆီကန် ငွေ ၁၀၇၀၀၀၀
ဆာရီလက်ခန် ငွေ ၁၀၈၀၀၀၀၀
ပီရုးငွေ ၂၉၂၀၀၀ တွေဟာ အ မေရိကန်ပြည်ထောင် စု မှာ ရှိတဲ့ တော်လှန် ရေးရဲ့ အားတွေလို့ သင် ထင် တယ်
အ ပေါ်က မေးခွန်းများကို သင် ဟာ မဟုတ်ပါ လို့ ဖြေ ရင် တော့ သင် ဟာ သိပံ္ပနည်းကျစွာဘဲ စောင်းတယ် ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်နိင် ပါတယ် အဲဒီရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ အချက်အလက်ကို ကြည့်ဖို့ ရန် ချက်ကျလက်ကျ လုပ်ကိုင် နည်းသင့် မှာ ရှိ နေပါပြီအဲဒါ က တော့ အ မေရိကက် ပြည်ထောင် စု မှာ တော်လှန် ရေးအတွက်ကျယ်ပြော သော လူမှု အ ခြေခံမ ရှိဘူးဆိုတာကို ပါ သင် ဟာ အလင်းရောင် ကို ဆောင် ကျဉ်းပေးလာသူ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ပြုလုပ် သင့်ပါတယ်
ဒီ မေးခွန်းတွေကို ဖြေဖို့ ရန် သင် ဟာ စိတ် ရှပ်ထွေးနေမယ်ဆို ရင် တောင် ဒီ အ ဖြေ တွေဟာ ဟုတ်တယ်ဆို တာ သင် သိသင့် တယ်လို့ ထင် ပါတယ် ထို့ နောက် သင့် ကိုယ် သင် သတ္တိနည်းသူ ဒါမှမဟုတ် ခြံစည်းရိုးခွထိုင် တဲ့သူဆိုတာကို ဆင် ခြင် သင့်ပါတယ် သင့် ကိုယ်သင် မာ့ဆစ် တစ် ယောက် လို့မယူဆ သင့် ပါဘူး တော်လှန် ရေး သိပံ္ပ အချက် အလက် တွေဟာ အမှန်ကို ပြောဖို့ ရန် မ ကြောက် ရွံ့ပါဘူး
ဘယ်သူက ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ ရန်သူဖြစ်လဲ?
ဘယ်သူက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်လဲ?
ဒါဟာ ပထမဆုံး အ ရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ ဒါတွေဟာ မော် အလုပ်အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ပွင့် လင်းတဲ့ စကားလုံးတွေပါ တစ် ကမ္ဘာလုံး အ နေနဲ့ ဘယ်သူက ရန်သူဖြစ်တယ် မိတ် ဆွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မ ခွဲခြားနိင် သူဟာ
တော်လှန် ရေးသိပံ္ပပညာ မရှိဘဲ တော်လှန် ရေးလုပ်ဖို့ဆို တာ ရေ ရှည် မဖြစ်နိင် ပါဘူး
ကမ္ဘာကြီးကိုလှုပ် ရှားစေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ရွေ့လျားအားဟာ ဖိနိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေ ပြည့်နေတဲ့ ဓန ရှင် ကမ္ဘာအ နေ နဲ့ ရုန်းကန် လှုပိ ရှားမှု တွေနဲ့ ပြည့်နေ တဲ့ ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစားကမ္ဘာသို့ ဖြစ်ပါတယ်
အဲဒီ သေချာတဲ့ အချက် အလက်ကို မမြင် နိင် တဲ့လူက ကွန် မြူနစ် မဟုတ်ပါဘူး
Category : စီးပွားရေးများ/Economics
မာ့် ရဲ့ ချို့ယွင်းချက် များမှ တချို့ကို အလျင် အမြန် လေ့လာခြင်း →